by सुरज पराजुली १० अशोज २०७७
भक्तपुर भन्ने बित्तिकै तपाईंको दिमागमा जुःजुः धौ आउला । नेवार बस्ती, नेवारी खाजा या काठका सुन्दर मन्दिरहरू आउलान् । यी सबैकुरा भन्दा पर या तपाईंले अनुभव गर्न नपाएको एउटा अद्भुत आश्चर्य हुन सक्छ भक्तपुर पुग्न प्रयोग गरिने भक्तपुरे गाडी । गाडी नभनी भक्तपुर एक्सप्रेस भनेर इज्जत दिऊँ क्यारे । हस्याङ फस्याङमा दौडिएको यमराजको भैँसी जस्तो देखिने तर सत्र ठाउँमा अठार चोटी एक-एक घण्टाका दरले बिसाएपछि भक्तपुरबाट बिहान हिँडेको गाडी साँझमा काठमाडौं पुग्छ ।
काँकरभिट्टाबाट हिँडेको मान्छे बेलैमा काठमाडौं आउला तर भक्तपुर बाट हिँडेको अहँ ! भन्न सकिँदैन ।
सि जिन पिङ, रोटेपिङ या कुनै पनि पिङ या कुनै देशको राष्ट्रपति/राष्ट्रपत्नि नेपाल आएका छन् भने बुझिहाल्नु, आज हिडेर घर जान पर्छ । गाडी नपाउने पनि होइन, तर यसरी भरिएको हुन्छ कि “जान्छु ल, खै त हाँसेको” भनेर हुइँकिन्छ, रोकिँदैन कतै । यस्तै कुनै एक दिन कतै दक्षिणतिरको लाल बुझक्कड आएको बेला म पनि परेँ फसादमा ।
बागबजारको भक्तपुर बसपार्कमा कोकोहोलो मच्चिएको थियो, गाडी नपाएर । ट्याक्सीवालाहरू ङिच्च हासिरहेका थिए । “दशैं आयो” मात्रै भनेका थिएनन् तर अनुहारको भाव त्यस्तै थियो । तुरून्त कुलेलाम ठोकिहाले त्यहाँबाट ।
बसपार्क पुगेको, कुनै आन्दोलन या आमसभामा पुगे जस्तै लाग्यो । मान्छे नै मान्छे । म झुक्किएँ, एकछिन कतै आज नेपालको कुनै खेल त छैन । कतै म दशरथ रंगशालामा त आइपुगिनँ ? होइन ! होइन रहेछ । बसपार्कै रहेछ । बस नभा’को मात्र रहेछ । कसैले मेरो हात तानेर “जाने हो ?” भनेपछि पो झसङ्ग भएर थाह पाएँ ।
एउटा विप्लवको कार्यकर्ताझैं पीडितले “यता कुरेर फाइदा छैन भाइ गेटमै जाऊँ घेर्न” भन्यो । हामी दौडियौँ । गाडी पौने प्रतिशत भरिएर आयो । अमर सिंह थापा र बलभद्र कुँवर पनि शत्रुमाथि त्यसरी जाइलागेका थिएनन् कहिल्यै, जसरी हामी जाइलाग्यौँ गाडीमा । खुट्टो गाडीमा टेक्ने बेलामा एउटा प्रचण्ड जस्तो देखिने मान्छेले पछाडिबाट क्याच्घ जुत्ता कुल्चिदियो । जुत्ता फुस्कियो । तेल्लाई केका रिस थियो कुन्नि जुत्तासंग ! एउटा खुट्टामा जुत्ता एउटामा बुढी औंला निस्केको मोजा लगाएर म उस्लाई हेरिरहन मात्र सकेँ । गाडी मलाई नियन्त्रणमा लिएर हिँड्यो आफ्नै गतिमा ।
“वारि खोला पारि खोला पिरती बोकी म कत्ति धाऊँ
तिमी मेरी प्रियसी परे ता पनि भाडा चैँ दिएरै जाऊ”
वाला सन्देशले ढोकामा स्वागत गर्यो ।
खलासी करेन्ट चपाएर घरीघरी टाउको झट्कारिरहन्थ्यो । मानौँ उसले जनयुद्धको बेलामा खाएको एउटा गोली टाउकोमा अड्किएको छ । दुर्गेस थापाको बिच बिचमा “टुँट” भएको गीत बज्दै थियो । तर गाडीमा “टुँट” नराखिएको पुरानो भर्सन ।
ओलीको मधेस धारणाझैं बेला-बेलामा दुईजिब्रे खलासी “दाइ पछाडी सर्नु न” भनेर हतोत्साहित र “मिलेर बस्नु न” भनेर प्रोत्साहन गरिरहन्छ । ओलीकै मन्त्री परिषदजस्तो ऊ खुशी थिएन खासै । धेरै मान्छे चढाउन नपाएर । दुई चारजना मान्छे देखेर उसले ढोका खोलेर ड्याम्म एकचोटी गाडीको छातीमा हान्यो । कुईईईयय गर्दै गाडी भृकुटीमण्डपको पुल नेर यस्सो रोक्ला जस्तो के गरेको थियो । शेरबहादुर जस्तो ट्राफिकले बडललल बडललल गरिहाल्यो । सिट नपाउने सांसदहरूझैं हेरिरहे चढ्न नपाउने यात्रुहरू । गाडी हुइँकिहाल्यो ।
ढोकामा उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोजस्ता केही मान्छेहरू, पशुपति घुम्न आएका केही भारतीयसँग आवत जावत गर्नै गाह्रो हुनेगरी ढोकै थुनेर बसेका थिए । मानौँ एक किसिमको नाकाबन्दी लगाएका हुन् तिनीहरूले । यही बेलामा कुनै क्रान्तिकारी (सरकारी भाषामा आतंककारी) समूहले ढुस्स मुला बम छोडे । खपिनसक्नु भयो । काठमाडौंमा मास्कको महत्त्व यही बमले बुझाइदियो । यसो नाक छामे रगत चाहिँ धन्न आएको रहेनछ ।
हिसिलाजस्ती देखिने एक महिला र उनको श्रीमान गाडीको माथिको डन्डी समाएर मेरो छेउमै उभिएका थिए ।गाडीमा ब्रेक लाग्दा घरीघरी मेरो नाक उसको काखीसम्म पुग्थ्यो । म अर्धचेत हुन्थे । अहो ! असन्तुष्टिको क्या नमिठो गन्ध । उफ्… !
माइतीघरमा रोक्न नपाउने नियमसँग आक्रोशित हुँदै थिए केही यात्रु संघका कार्यकर्ता । एकैपटक गाडी बबरमहल अगाडि खलासीको “झर्ने छ भने भाडा हातमा बोकेर आउनु है” सँगै रोकियो । दुई चारजना ठेल्दै निस्कन थाले। गच्छदार र गोकुलजस्ता देखिने दुईजनाको भाडामा डिसकस पर्यो । ७० रूपियाँको चासोबाजो नमिले जस्तो सुनिन्थ्यो । घरीघरी अपशब्द बोले जस्तो पनि लाग्थ्यो झर्नेले । त्यही मौकामा जाँड धोकेर एउटा महराझैं जड्याहा चढ्यो । ह्वास्सै गाडी पुरै गन्हायो । अगाडि उभिएकी एउटी महिलासँग टाँसिएर घरीघरी आफ्ना हात कताकता ठोक्काउन थाल्यो । महिला सिटमा एकजना महिला अधिकारकर्मी र अर्को राष्ट्रपति जस्तो देखिन्थीन् । तर आँखै अगाडि महिलाहिंसा भइरहँदा पनि चुप थिए दुवै ।
रातो भालेनेर गाडी रोकियो । एक दुईजना जंगली जस्ता मान्छेहरू र केही बुढाहरू चढे जेनतेन । एउटा ज्ञानेन्द्र जस्तो देखिने अधबैंसे पुरुषलाई आफ्नो कुलतमा फसेको छोरोसँगै सिटबाट उठाइयो जबर्जस्ती । ऊ फतफताउन थाल्यो । विरोध गर्न थाल्यो । दुईचार जनालाई हिर्काइहाल्यो । सबैजनाले यिनीहरूलाई गल्हत्याएर निकाल्न पर्छ गाडीबाट भने । उसलाई पछारियो भुइँमा, उसका केही सामानहरू पनि अब गाडीकै भए । गाडीको भन्दा पनि ती जंगली र बुढाहरूले कब्जा गरे ।
बिजुलीबजार पुलपारि गाडी चढ्न हतार कमल थापाको अनुहार परेको मान्छेलाई । बेलायतबाट फर्केको रबिन्द्रझैं हुलिया भएको व्यक्ति “खान पुगोस् दिन पुगोस्” भन्दै । एउटा नगरपालिकाको सहयोगको अपिल लेखिएको कागज बोकेर पछ्याउँदै थियो । सिसाबाट देख्न सकिन्थ्यो ।
“६२/६३ले अगाडिको सप्पै मान्छे हाल्ने भयो, ल ४७ पनि गयो गुरू” खलासी अतालियो । हुन त उसको गाडीमा केही मान्छे एउटा खुट्टामा उभिएर तपस्या गर्दै थिए । यस्तै तपस्या वनमा गएर गर्ने हो भने बमजनलाई उछिनी सक्थे । चालक तात्तियो ती दुवै गाडीलाई उछिन्न । मानौँ म काङ्ग्रेस, एमाले या माओवादी कुनै पार्टीको गाडीमा छु । र उनीहरू जसले सक्यो उसले बढी लुट्न चाहन्छन् । विष्णु पौडेलझैं देखिने चालकले जसरी हुन्छ भरे मालिकलाई उचित नाफा बुझाएर खुशी पार्न पर्ने हुन्छ ।
बानेश्वरमा एउटा सिट खाली भयो । गगन थापाझैं देखिने एक युवाले एकजना उभिरहेका बुढालाई नै सिट छोडिदिए । ठिकै गरे भलो गरे । राजनीतिमा यसो गरेको भए चैँ मलाई चित्त बुझ्दैनथ्यो।
तिनकुनेमा अघि जुत्ता कुल्चने प्रचण्डजस्तो मान्छे फेरि देखियो । कतिबेला पछाडि झुण्डिएको रहेछ । गाडीबाट उसका केही आफन्त उसलाई देखाउँदै झरे । “१७ रुपियाँको जिम्मा तपाईंलाई आएको छ”, खलासी हल्का झन्कियो । “अहँ, हुँदैन म ५ रूपियाँ भन्दा धेरैको जिम्मा लिन सक्दिनँ ” भनिरह्यो, “गरीब छु गाउँमा एक कठ्ठा जग्गा र तीन तोला सुन मात्रै छ मसँग। अब त्यही दिए मात्रै त हो नि ।” ऊ निराश भयो । खलासीलाई माया लाग्यो छोडिदियो ।
कोटेश्वरमा पुगेपछि केही विवेकशील मान्छेहरू चढे । सिट नपाएकोमा थुकथुक थुकथुक गरिरहे । गुनासो गरिरहे तर कसैले वास्ता गरेनन् ।
जडिबुटी पेट्रोल पम्पमा लालबाबुकै गाउँका जस्ता मान्छे साइकलमा तेल हालेझैं देखिन्थे । गाडी कुदिहाल्यो के गर्ने, छलियो । “म गाडीको स्टाफ हुँ, मसँग भाडा माग्छस् ? भट्टीमा पोल्दिन्छु बढी बोलिस् भने” भनेर आलम आलम जस्तो एउटो झर्यो । जडिबुटी पारि ।
गाडी हुइँकियो र जडिबुटी पुल काटेर भक्तपुरको नाका प्रवेश गर्यो ।
[ नोट :
चैँ : चाहिँ (बोलीचालीमा प्रयोग हुने भाषा) ]